အချစ်၏ပုံပန်းသဏ္ဍာန်- ၎င်းတို့ကို မည်သို့ခွဲခြားသတ်မှတ်မည်နည်း။ စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 10/06/2022 10:00 | စုံတွဲနှင့်လိင်
မျက်လုံးသည် အမြင်အာရုံ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားကို ဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ခံစားနေရသည်ကို ဖော်ပြပါ။ မယုံနိုင်စရာလို့ထင်ရပေမယ့်၊ ငါတို့မျက်လုံးတွေက ငါတို့ငေးကြည့်တဲ့အခါ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသာတဲ့ အရိပ်အယောင်တွေပြတယ်။ သူတို့ စိတ်အားထက်သန်နိုင်တယ်။ သူတို့ကို ဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်မလဲ။
ဒီလိုပုံစံမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ အသေးစိတ်ကြည့်တယ်။ စုဆောင်းထားသော စိတ်ကူးများထဲမှ အချို့ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာအားဖြင့်။ မတော်တဆသူတို့က သင်ရှာတွေ့ချင်တဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒီကောင်လေး ဒါမှမဟုတ် ကောင်မလေးကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် သင်လည်း သိပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
1 ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်မလဲ။
2 တခြား ဘယ်လိုပုံစံတွေရှိလဲ။
4 အချစ်ဇာတ်လမ်းကို စချင်တဲ့အခါ
5 မျက်လုံးနဲ့ တွဲချင်တဲ့အခါ
လူတစ်ဦးသည် အခြားလူတစ်ဦးကို ချစ်မြတ်နိုးနိုင်သော်လည်း ထိုအရာများတွင် ဖော်ပြလိမ့်မည်။ အဆက်မပြတ် အကြည့်၊ မင်းနဲ့စကားပြောတဲ့အခါ သူက မင်းကို မျက်လုံးနဲ့ တိုက်ရိုက်ကြည့်လိမ့်မယ်။ စိတ်အားထက်သန်မှုကိုယ်တိုင်က လှည့်စားလေ့ရှိပြီး အချို့အချိန်တွေမှာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာ အမှန်ပါပဲ။ ရှက်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာကို လှည့်စေသည်။. ဒါပေမယ့် အာရုံစူးစိုက်ကြည့်မိရင် ရှက်ရွံ့စိတ်က အခြေအနေကို လွှမ်းခြုံထားပြီး ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပြင်ပအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ရောက်သွားရင်တောင် အဆုံးမှာတော့ သူ အဲဒီ့မျက်လုံးကို တိုက်ရိုက်မဆုံးရှုံးနိုင်ပါဘူး။
ဘယ်အချိန်မှာ သတိထားမိလဲ။ အကြည့်တစ်ခုက အလင်းကို ထုတ်လွှတ်သလား။ ကောင်းပြီ၊ အဲဒါက စိတ်ဝင်တစား ထုတ်လွှင့်တဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်မှာ မမှားနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ တပည့်များ ကျယ်လာသောအခါ တောက်ပမှု၊ စွမ်းအင်၊. ကောင်းပြီ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် နှလုံးသားနှင့် ချစ်သောအခါ စွန့်လွတ်သွားပုံရသည်။
အဲဒါတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိနိုင်တဲ့ တခြားပုံစံတွေ ရှိပါတယ်။ စိတ်အားထက်သန်မှု သို့မဟုတ် စိတ်ဝင်စားမှုအခိုက်အတန့်များ။ ဘေးကိုကြည့်တဲ့အခါ၊ နက်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အဝေးကိုကြည့်တဲ့အခါ ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါတယ်။
စကားပြောဆိုမှုပုံစံတစ်မျိုးမျိုးကြားတွင်၊ သင့်မျက်လုံးများသည် ညာဘက်သို့ ရွေ့သွားပါက၊ တစ်ခုခုကို စိတ်ကူးယဉ်နေတာ ဒါမှမဟုတ် လိမ်ပြောနေတာကြောင့်ပါ။
Si မျက်လုံးများ ရွေ့လာသည်။ သူပြောနေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ခုခုကို မှတ်မိဖို့ကြိုးစားနေတာ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ပြောနေတာကိုတောင် အာရုံစိုက်နေတာကြောင့်ပါ။
ရသောအခါ အဲဒီအကြည့်က ငုံ့သွားတယ်။ အတွင်းစိတ်ခံစားမှုများနှင့် နီးစပ်ရန်၊ ထိုခံစားချက်များကို ပြန်လည်ဖန်တီးပြီး သင့်ထံတွင် သူစိတ်လှုပ်ရှားနေသည် သို့မဟုတ် စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံပေါ်စေရန် ကြိုးစားသည့်အခါဖြစ်သည်။ ပြန်သွားမလား။ ပုံကို ရှေ့ မှာ ထား ပါ မင်းကို စိုက်ကြည့်နေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက မင်းအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်တစ်ချက်ကို လက်လွတ်မခံဘဲ မင်းပြောတာကို နားထောင်ချင်လိုက်တာ။
အဲဒီလူရှိရင် မျက်စိတစ်ဝက်မှိတ်ထားသည်။တစ်ခုခုကြောင့် သူမ စိတ်ဆိုးသွားနိုင်သလို တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့် စိတ်ဆိုးသွားနိုင်လို့ပါ။ အဆက်မပြတ် မျက်တောင်ခတ်နေလျှင် သူ့အကြည့်တွေကို ကောင်းကောင်းမပြင်တတ်ဘူး၊ စိတ်မငြိမ်လို့ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုကို ဖုံးကွယ်ထားတာမျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သူချစ်တယ်ဆိုတာကို ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက် မျက်တောင်တွေအများကြီးခတ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုသွင်ပြင်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်စေရန် အခြားအမူအရာအမျိုးအစားများကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရပါမည်။ သူက မင်းကိုကြည့်ပြီး ပြုံးနေရင်သူ့အပြုံးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ သူ့ပါးပြင်တွေ တက်လာပြီး မျက်လုံးထောင့်တွေ ရှုံ့သွားတယ်ဆိုရင် အဲဒီလူကြောင့် ဖြစ်တာ။ သင့်ရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့် သူမသည် စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်။ သူ့ခံစားချက်တွေက မှန်တယ်။
အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို ဥပမာပေးတဲ့အခါ အသေးစိတ်ရှိတယ်။ သူက မင်းကို အပေါ်နဲ့ အောက်ကြည့်နေတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် သင့်အား စိတ်ဝင်စားမှုများစွာပြသပြီး သင့်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ ထိုးဖောက်ပြီး စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေသော အသွင်အပြင်ကို ဆိုလိုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အဆက်မပြတ် လိုက်လာသည်။ သင့်မျက်လုံးကို ကြည့်ပြီး သင့်ကို လွှမ်းမိုးထားပုံရသည်။ အဲဒီလူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလွန်ကဲပြီး အမြဲတမ်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားတတ်သူပါ။
ဟုတ်ကဲ့ စူးစူးရဲရဲနဲ့ လုံခြုံရေးကို စိုက်ကြည့်၊ အဲဒီလူက ဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဆိုတာ တစ်ဖက်က သတိပြုမိတဲ့အချိန်ပါပဲ။ တကယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလဲဆိုတာကိုလည်း ပြသရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စွမ်းအားနဲ့ တက်ကြွမှုကို ကြိုက်တယ်။
လူက စိုက်ကြည့်လို့ မရပေမယ့် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဆက်တိုက်လုပ်တယ်၊ တစ်စက္ကန့်၏ စက္ကန့်ပိုင်း သို့မဟုတ် ချက်ခြင်းအတွက်။ မင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာမရှိပေမယ့်၊ တစ်စက္ကန့်ကျော်လောက်ကြာအောင် လိုက်ရှာပြီးမှ အဝေးကို ထွက်သွားတယ်၊ ဒါဟာ အချစ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ရှိလို့လား။
Si သူက မင်းကို တစ်စက္ကန့်အောက်ပဲ စောင့်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ အဝေးကိုကြည့်၊ တစ်ယောက်တည်း သင်စိတ်ဝင်စားသည်ဟု ဆိုလိုနိုင်သည်။. သို့သော် ထိုလှပသောအပြုံးသည် သူ့နှင့်အတူ လိုက်ပါလာပါက ကောင်းကောင်းကြည့်ရှုလိုက်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ပို၍စိတ်ဝင်စားဖွယ်တစ်စုံတစ်ရာကို ဆိုလိုသည်။
မင်းရဲ့ရုပ်ရည်က ဖြားယောင်းဖို့ဆိုရင်၊ သင်ဝှက်ထားသော လက်ဆောင်ကို မြှင့်တင်ပါ။. မင်းရဲ့ ဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှုမှာ အသေးစိတ်ကို မဆုံးရှုံးလိုက်ပါနဲ့ မင်းကြိုက်တဲ့လူနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ အမြဲတမ်း စိုက်ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
ဒါပေမဲ့ စိတ်အေးလက်အေး လုပ်ပါ။၊ မင်းက ကျူးကျော်နေတယ်လို့ မထင်ဘူး။ သင်၏နေရာလွတ်ကို အနှောက်အယှက်ပေးချင်သည်။. တောင့်တပြီး တစ်စက္ကန့်ရဲ့ အပိုင်းအစတွေကို အဝေးကို မျှော်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်သားကို မကြည့်မိဖို့ ကြိုးစားပါ။ဒါ မင်းအကြိုက်မဟုတ်ဘူး။ ကြည့်ချင်ရင် သတိရှိရှိလုပ်ပါ၊ မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောပြီး မျက်လုံးထဲကို ကြည့်လိုက်ပါ။ လိင်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်ပင်၊ ဒေါသအကြည့်က သာယာမနေဘူး။ယုံကြည်မှုပိုရှိလာတဲ့အခါ ချန်ထားနိုင်ပါတယ်။
သို့သျောလညျး လူတွေကြားက ဆက်သွယ်ရေး စွမ်းအားတွေ တိုးတက်ဖို့ လိုတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သိကျွမ်းရန် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်ပြီး အခြားသူများထံမှ သင်ယူရမည့်အရာများ ပျောက်ကွယ်မသွားပါစေနှင့်။ စကားမဟုတ်သော ဘာသာစကား၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » အချစ်၏ပုံပန်းသဏ္ဍာန်- ၎င်းတို့ကို မည်သို့ခွဲခြားသတ်မှတ်မည်နည်း။